Muxuu Ka Dhiganyahay Shirka Maamul Goboleedyada Uga Furmaya Magaalada Kismaayo?
Saturday October 07, 2017 - 08:58:29 in Wararka by Super Admin
Xilli uu meel sare gaaray khilaafka u dhaxeeya maamul goboleedyada iyo dowladda Federaalka ayay magaalada Kismaayo martigelinaysaa shir xasaasiyad gaar ah leh oo banaanka soo dhigi doona fashilka dowladda Farmaajo.
Axmed Madoobe ayaa Shariif Sakiin kusoo dhoweeyay Kismaayo
Wafi uu hoggaaminayo Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa shalay gaaray magaalada Kismaayo halkaas oo uu si heer sare ah ugusoo dhoweeyay Axmed Madoobe oo madax u ah maamulka isku magacaabay ‘Jubbaland’.
Shirkan oo lafilayo in uu furmo maalinta Axadda waxaa isugu imaanaya inta badan hoggaamiyaasha maamul goboleedyada kajira Soomaaliya oo ay dhiseen dowladaha shisheeye, Axmed Madoobe oo warbaahinta lahadlay wuxuu sheegay in shirkan uu yahay Gogol Nabadeed oo looga hadlayo xallinta khilaafka u dhaxeeya qaar katirsan maamul goboleedyada iyo DF-ka iyo ladagaallanka Al Shabaab!.
Wasiirro katirsan DF-ka ayaa ka digay shirka Kismaayo oo ay ku tilmaameen mid sharci darra ah oo caqabad ku ah dib u heshiisiinta, ilo wareedyo lagu kalsoonyahay waxay sheegayaan in Xasan Cali Kheyre uu dadaal ugu jiro sidii uu Cabdi Wali Gaas iyo Waare uga baajin lahaa shirka Kismaayo.
Siyaasiyiin ku sugan Kismaayo ayaa sheegaya in haddii shirkaan uu qabsoomo uu sababi karo in isbahaysi siyaasadeed oo ka dhan ah DF-ka ay sameystaan maamul goboleedyada, Warsaxaafadeed ay horay usoo saareen 5 maamul goboleed ayay ku sheegeen in ay kasoo horjeedaan siyaasadda khilaaf abuuridda ee Villa Somalia ka dhax waddo maamul goboleedyada sida wixii ka dhacay magaalooyinka Cadaado iyo Jowhar.
Dowladaha Itoobiya,Kenya iyo waxa loogu yeero Beesha caalamka ayaa dalka Soomaaliya ka dhisay maamul goboleedyo mid walba uu sheegto madax banaan dhanka maamulka ah waxayna maamulladaasi si toos ah ula xaajoodaan dowlado iyo hay’ado caalami ah.
Tani waa siyaasadda qeybo oo xukun ee uu gumeystuhu dajiyay tobanaan sanadood ka hor, dad badan ayaa aaminsan iyo itoobiya iyo xulufadeedu aysan ogoleyn maamul awood leh oo soomaaliya ka istaago haba ahaado calmaani diinlaawe ah balse ay doonayaan soomaaliya oo dowlad goboleedyo isdiidan ka taliyaan sida hadda jirta oo kale.